UTutu ugxeke uhulumeni ngokuhlambalaza izwe ngolwaseNkandla | News24
UTutu ugxeke uhulumeni ngokuhlambalaza izwe ngolwaseNkandla
Johannesburg – U-Archbishop Desmond Tutu ugxeke uhulumeni waseNingizimu Afrika ngokuhlaza izwe ngokukhipha uMengameli Jacob Zuma phambili ngokuthi angakhiphi ngisho nendibilishi ngokusetshenziswa kwezigidi kuqiniswa ezokuphepha emzini wakhe oseNkandla.
Kulo muzi kaMengameli Zuma oseNkandla kwasetshenziswa imali yabakhokhi bentela engu-R246 million kuqiniswa ezokuphepha.
“Ngesikhathi uhulumeni waseNingizimu Afrika unqabela iDalai Lama imvume yokuhambela ingqungquthela yeNobel Laureayes eKapa ngonyaka owedlule ngababiza ngabantu abanonya abangenza noma yini engasile ukuzithuthukisa,” kusho uTutu kwisitatimende.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe 5 ngombhikisho waseMbazwana
“Umbiko kaNgqongqoshe wethu wamaPhoyisa wokukhipha phambili umengameli ngokuchithwa kwezindodla emzini wakhe, kunikeza lo hulumeni elinye igama elisha.”
UMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela ngo-2014 wathola ukuthi uZuma wazuza ngokungemthetho nomndeni wakhe ngesikhathi kuqiniswa ezokuphepha eNkandla njengoba kwakhiwa isibaya, indawo yezivakashi nokunye.
NgoLwesine uNngqongqoshe wamaPhoyisa uNkosinathi Nhleko uthe uphenyo lombuki wakhe luthole ukuthi umengameli akumele akhokhe ngisho nendibilishi ngemali eyasetshenizwa emzini wakhe.